Komla Dumor oo geeriyooday - BBC News Somali
Komla Dumor oo geeriyooday
Image caption Wariyahii BBC Komla Dumor wuxuu ahaa 41 jir.
Wariyihii BBC Komla Dumor, ayaa ku geeriyooday si kadis ah gurigiisa London kadib markuu ku dhacay wadno xanuun. Wuxuu ahaa afartan iyo kow jir. Komla ayaa ku soo biiray BBC sanadkii 2007-da, kadib markii uu in ka badan toban sano ka shaqaynayay radio ku yaalay waddankiisa Ghana.
Wuxuu dhawaan sheegayay barnaamishka Focus on Africa ee telefishinka ka baxa shanta maalmood.
Tafaftiraha Wararka caalamka ee BBC, Andrew Whitehead, ayaa sheegay in geerida Komla ay shaqaalaha ku reebtay naxdin iyo murugo. Wuxuu ku tilmaamay nin shaqadiisa ku fiican oo dhagaystayaashiisa ay jecel yihiin, oo ahaa qof fiican oo farxad leh.